Antony 4 mahatonga ny sipanao ratsy eo am-pandriana (+ toro-hevitra 7 ho an'ny firaisana ara-nofo tsara kokoa) - Fifandraisana
Raha efa tonga eto amin'ity pejy ity ianao dia mety tsy dia tsara loatra eo am-pandriana ny sipanao.
Ankehitriny, mety tsy dia mahatsiravina izy. Satria raha izy dia mety hidina amin'ny tsy fahampian'ny simia eo aminao io, ary tsy mila azy eo am-pandrianao mihitsy ianao. Azonao ny mahazo azy.
Ka misy tokoa SASANY simia eo aminao - ny zavatra hafa rehetra amin'ny fifandraisanao dia toa mandeha tsara, ary fantatrao fa misy ny mety any.
Saingy tsy manetsiketsika ny tontolonao eo anelanelan'ny ravina izy. Ary manontany tena ianao raha misy zavatra azonao atao momba izany.
Ny vaovao tsara dia misy tokoa.
Ny firaisana ara-nofo dia tsy zavatra raikitra mihitsy. Tsy mitovy isaky ny manao azy ianao. Ny tiantsika sy ny tsy tiantsika dia mivoatra sy miovaova, isan'andro isan'andro ary isan-taona.
Arakaraka ny ananananao firaisana amin'ny olona no hahalalanao ny safidiny sy izay tsy mahasoa azy ireo.
Arakaraka ny ahazoanao aina kokoa eo amin'ny fifandraisanao sy ny fahatakaranao tsara izay mandeha ao an-tsain'izy ireo no hampifandraisinao lalindalina kokoa amin'ny sehatra ara-nofo.
Fa tsy mila mipetraka fotsiny ianao ary manantena fa handamina ny fotoana ny toe-javatra. Betsaka ny zavatra azonao atao hanampiana ny sipanao ho olon-tiana tsaratsara kokoa ho anao ary ahazoanao antoka fa tanteraka amin'ny fiainam-pirazanana ianareo roa.
Antony 4 mahatonga ny sipanao ratsy eo am-pandriana
Voalohany indrindra, andao hizaha antony vitsivitsy izay mety tsy ho olon-tiana tsara ny sakaizanao amin'izao fotoana izao.
1. Tsy manana traikefa izy.
Ny antony lehibe mahatonga azy tsy ho tsara loatra eo am-pandriana dia satria tsy manana traikefa ara-nofo amin'ny ankapobeny izy.
Rehefa dinihina tokoa, tsy misy amintsika mahalala izay ataontsika rehefa manomboka manao firaisana isika. Momba ny fitsapana sy ny lesoka izany.
Mety ho izany no izy na dia toa nanao firaisana ara-nofo maro samy hafa aza izy. Satria mety tsy nanana an'izany firaisana ara-nofo izany rehetra izany izy raha tsy nanao firaisana maharitra mihitsy izay midika hoe manao firaisana amin'ny olona tsy tapaka.
Ny fampiharana dia tena tonga lafatra raha resaka firaisana ara-nofo no resahina.
Ny fifandraisana maharitra misy firaisana ara-nofo tsy tapaka miaraka amin'ny olona iray izay ahatsapantsika fa mahazo aina miaraka aminy dia afaka mampianatra antsika betsaka momba ny fanajana ny filan'ny olon-kafa sy ny filany ary manampy antsika hametraka ny rantsan-tanantsika amin'izay tena mahodina antsika.
Noho izany, ny tsy fahampian'ny traikefa dia mety hidika fa tsy azony antoka akory ny zavatra tiany, avelao ny hahafantatra izay tianao.
2. Tsy mifanaraka amin'ny safidinao izy.
Ny lehilahy sasany dia sahirana mahatakatra fa samy hafa ny vehivavy rehetra. Indrindra raha toa ka tsy nanana afa-tsy mpiara-miasa vitsivitsy izy ireo, na mpiara-miasa iray fotsiny izay nananan'izy ireo fifandraisana maharitra. Mety hieritreritra fotsiny izy ireo fa mitovy amin'ny fomba fiasan'ny vatanao.
Io dia rehefa manana fifandraisana maharitra izy dia mety ho ratsy. Angamba ny taloha iray aminy dia tena tia zavatra tsy mahasoa anao fotsiny.
Tsy zavatra tokony hotanananao hanohitra azy izany, mazava ho azy. Manomboka indrindra, satria angamba tena miezaka mafy izy hampifaly anao. Tsy dia manosika ny bokotrao fotsiny izy.
Mbola tsy tsapany fa mila mifanaraka amin'ny zavatra tianao izy satria ny firaisana ara-nofo dia tsy mitovy habe amin'ny rehetra.
3. Tsy raharahainy na sitrany ianao na tsia.
Okay, noho izany antony izany dia misy ifandraisany kely amin'ny iray amin'ny resaka fifandraisanao.
Ny olana dia mety hoe tsy miraharaha ny fahafinaretanao fotsiny izy. Na ny ataony loha laharana ny fahafinaretany manokana mihoatra ny anao.
Ankehitriny, tsy midika izany fa tsy maintsy devoly mihitsy izy. Mampalahelo fa any amin'ny fiarahamonina tandrefana, ny fahafinaretan'ny lehilahy mandritra ny firaisana dia mbola hita ho zava-dehibe indraindray, ary ny vehivavy ho toy ny bonus tsy voatery.
Ka, vokatra avy amin'ny tontolo iainany izy, eny. Saingy tsy midika izany fa tsy andraikiny ny mahafantatra izany ary miasa amin'izany.
Andraikiny ny manome anao, ny sakaizany ara-nofo, ny fanajana mendrika anao, mandray ny fahafinaretanao toa ny fandraisanao azy.
fotoana fanombohan'ny efitrano fanafoanana
4. Tsy maharitra maharitra fotsiny izy.
Angamba ny olanao lehibe dia tsy ny fomba itiavany fitiavana fa ny tsy faharetany lava hahitanao tena mankafy azy.
Angamba mila fotoana maharitra ianao amin'ny orgasme ary tsy afaka maharitra ela izy hahatonga anao amin'izany.
Mety ho izany satria manao firaisana fotsiny ianao indraindray. Na mety hitranga satria ny fahafinaretany no ifantohany fa tsy ny hahazoana antoka fa milamina koa ianao.
Torohevitra 7 hanampiana anao hanana firaisana tsara kokoa amin'ny sakaizanao
Manantena aho fa nahavita nametraka ny rantsan-tananao tamin'ilay olana. Fotoana izao hieritreretana ny zavatra azonao atao hanovana zavatra mba hankafizanao roa ny firaisana.
1. Ataovy amin'ny lafiny iray ny henatrao.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny miala amin'ny mahamenatra anao amin'ny firaisana sy ny filan'ny nofo.
Angamba tonga ho anao ny miresaka momba ny firaisana, ary tsara izany. Hanamora kokoa ny fanaovana resadresaka misokatra momba izay ilainao amin'ny vadinao izany.
Fa raha miresaka momba ny zavatra tadiavinao sy ny zavatra ilainao amin'ny vady ara-nofo ianao, dia tokony hiezaka mafy hametraka izany amin'ny lafiny iray.
Raha tsy maharesy ny henatrao ianao ary mifampiresaka amin'ny sakaizanao momba ny firaisana amin'ny fomba malalaka sy marina dia tsy hanatsara ny firaisana ara-nofo mihitsy ny zavatra eo aminao.
2. Aza sandoka izany.
Fahadisoana lehibe ataon'ny vehivavy maro dia ny fanaovana firaisana mahafinaritra amin'ny mpivady na dia tsy tena mahatsapa izany aza izy ireo.
Ankehitriny, mety halaim-panahy hamitaka azy ianao raha miaraka amin'ny olona iray ary fantatrao fa ho zavatra iray ihany izany.
Fa raha mieritreritra ianao fa mety hivoatra eo aminao ny fiarahana na manao firaisana amin'ny sakaiza ianao, avy eo ny fahafinaretana faking no fomba tsara indrindra hitifirana ny tongotrao.
Satria raha sandokao ianao dia hoheveriny lojika fa tianao izay ataony rehetra. Ka avy eo dia saika hanandrana azy indray izy, ary indray .
Ary hamela anao amin'ny toe-javatra sarotra io, satria mila manazava amin'ny sakaizanao ianao fa tsy nanao afa-tsy fahafinaretana ara-nofo fotsiny ianao dia ho lasa toe-javatra tsy mahazo aina.
Noho izany, alao antoka fa tena marina ianao ary maneho famantarana fahafinaretana izay tena tsapanao, ho anao rehetra.
3. Eritrereto ny olan'ny fifandraisana hafa.
Sarotra ny firaisana. Azoko antoka fa tsy mila ahy hiteny izany aminao aho.
Mifamahofaho miaraka amin'ny fihetsem-pontsika amin'ny fomba hafahafa, tsy hay hazavaina ary tsy azo ihodivirana.
Raha misy olana eo amin'ny fiainanao ara-nofo dia mety tsy ny fahaizan'ny sipanao ho olon-tianao no olana.
Eritrereto ny olana hafa eo amin'ny fifandraisanareo, toy ny tsy fahatokisan-tena na ny fahatahorana ny fanoloran-tena na ny marefo amin'ny tsirairay dia mety ho eo anelanelanao ao amin'ny efitrano fatoriana.
Ny famahana ireo olana ifotony ireo dia tsy azo ihodivirana fa hanampy amin'ny lafiny ara-pihetseham-po amin'ny firaisana ara-nofo, izay hidika ho fahafinaretana bebe kokoa amin'izany.
4. Lazao azy, asehoy azy.
Eny ary, tadidinao ny fomba nifanarahanay hamela henatra teo am-baravaran'ny efitrano fandrian?
Raha tianao ho olon-tiana tsaratsara kokoa ny sipanao dia mila miteny aminy ianao ary mampiseho azy ny tena dikan'izany.
Lazao azy izay tadiavinao. Tariho ny tanany. Kitiho ny tenanao mba hahitany izay tena mety aminao.
Ataovy mahasosotra izany! Raha tafiditra ao anatin'izany karazan-javatra izany ianao (ary samy manaiky ianao, mazava ho azy), ekeo fa ianao no tompon'andraikitra ary lazao aminy amin'ny antsipiriany izay tena tianao hataony.
Aza manantena azy hahafantatra amin'ny majika ny zavatra tadiavinao amin'ny telepathy. Tsy mandeha toa izany. Toy ny ankamaroan'ny zavatra, mihatsara kokoa amin'ny zavatra iray isika rehefa manana torolàlana mazava amin'ny fomba fanaovana azy!
5. Fantaro ny vatan'ny tsirairay.
Ny ampahany lehibe amin'ny olanao dia mety tsy mbola nahalala tsara ny vatan'izy ireo ianao. Fotoana izao hijerena.
Fomba iray tsara anaovana an'io ny fanaovana alina mahaliana. Manazava labozia ary avoahy ny menaka fanorana.
Raiso indray avy eo hifanorana sy hanarona ny santimetatra tsirairay amin'ny vatan'ny tsirairay.
Jereo ny toerana mampihomehy izay mahaliana azy na ny oroka malefaka manodinkodina azy ary asao izy hamoaka ny vatanao amin'ny fomba mitovy.
Hanampy anao roa hamantatra tsara izay bokotra ilainao atosika hamadika ilay iray hafa.
6. Alao antoka fa lalana roa-lalana io.
Raha tianao izy ho mpitia mihaino izay te hitondra anao amin'ny fahafinaretana dia mila izany ho azy koa ianao.
Raiso an-tsaina ireo zavatra tiany na izay mampivily azy any ivelany ary alao antoka fa manao izany ho azy ianao (raha mbola tsy mahatonga anao hahazo aina izy ireo, mazava ho azy).
Ny firaisana ara-nofo dia tsara raha tsy mahafinaritra indrindra ho an'ny olona roa voarohirohy, noho izany amin'ny fanaovana ny bitanao mba hanomezana azy ny fahafinaretana tiany, dia hirona kokoa hanao ezaka fanampiny hanomezana anao ny sitraka tianao izy.
Aza mieritreritra fa noho izy climaxes dia nanana traikefa nahafinaritra tokoa izy. Ataovy ho traikefa nahafinaritra tokoa!
7. Manaova firaisana ara-nofo betsaka!
Farany nefa tsy farany, ny fomba tsara indrindra hivoarana amin'ny zavatra iray dia ny fanaovana azy be. Mila manao fanazaran-tena ianao!
Mora ho an'ny fiainana ny manelingelina sy ny fotoana hatsaran'ny firaisana ara-nofo sy ara-pihetseham-po miaraka amin'ny vadinao hivoaka eo am-baravarankely, indrindra rehefa niaraka nandritra ny fotoana kelikely ianao na niara-nifindra.
Nefa arakaraky ny tsy anaovanao azy no tsy dia misy ny fahafaha-mitombo firaisana ara-nofo ianao ary manomboka manao firaisana ara-nofo mahafa-po izay hanamafy ny fatoranao mafy ara-pientanam-po.
Ny firaisana ara-nofo dia tokony ho mahafinaritra ary fomba mahafinaritra hampanakaiky anao amin'ny vadinao, koa ataovy lohalaharana izany. Raha tsy maintsy alamina noho ny asa na fanoloran-tena hafa izany dia ataovy. Ny firaisana ara-nofo voalahatra dia tsy midika hoe firaisana mankaleo sy tsy mahavita.
Mbola tsy azonao antoka izay hatao momba ny fampisehoana an-trano fatin'ny sakaizanao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
15 Tsy misy fomba Bullsh * t hahatsapa firaisana indray
ny tanjon'ny psikolojia dia
ahoana no ahafahantsika manova an'izao tontolo izao
ahoana no ahafantarako raha misy tovovavy ato amiko
zavatra ataonao rehefa mankaleo ianao
ohatra amin'ny lolom-po amin'ny fifandraisana
manao sonia ny vady taloha tadiaviko hiverina